Dhagayso Warbixin: Al-Kataa’ib Oo Filim kasoo saartay Dagaalkii Balad-xaawo. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Last updated Dec 14, 2017 622 0
Waqlud Caleyhim, ama ku ad-adkaada 2, waa ciwaanka filim xiiso badan oo ay baahisay mu’assasada warbaahineed ee Al-Kataa’Ib, kaas oo lagu soo bandhigay malxamadii taariikhiga ahyad ee magaalada Baladxaawo ku dhexmartay ciiidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo malleeshiyaadka maamulka jubbaland.
Filimkan oo soconaya qadar 33 daqiiqo ah, waxaa uu kusoo baxay labo luuqadood oo kala Afsoomaali iyo Carabi, waxaana markii ugu horeysay si toos ah loo arkayaa wixii ka dhacay Baladxaawo 20-kii dulxaj 1438 hijriyada.
Qeybaha hore ee filimka waxaa lagu soo gudbinayaa Istish-haadiga daah furay dagaalkii Baladxaawo, kaas oo lagu magacaabo Axmed Jaamac Nuur, oo loo yaqaano Zubeyr, wuxuu mujaahidkan da’da yar kasoo jeedaa beesh Reer Shabeelle, isagoona ku dhashey magaalada Marka ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose.
Sanadkii 1436-dii ayuu kusoo biiray Zubeyr sufuuta ciidamada Mujaahidiinta, isagoona ka qalin jabiyay mucaskarka Al-Shahiid Sheykh Muxamed Dulyadeyn Taqabalahullaah, 1438-dii ayuuna noloshiisa kusoo khatimey Istish-haadiyo uu ka fuliyay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo.
Muuqaallo qurux badan oo laga duubay Istishhaadiga kahor intaanu u dhaqaaqin duulaankiisa ayaa lagu daawan karaa filimka, kuwaas oo xiisaha filimka sii kordhiyay, wuxuuna istish-haadigu jeedinayaa dardaaran saameyn leh oo ku socoda Mujaahidiinta.
Dardaaranka kadib wuxuu Zubeyr ku dhaqaaqey hadafkiisa isago wata gaari dheereeya, waxaana markaas wehliya kaamirada mu’assasada Alkataaib oo soo bandhigeysa ilbiriqsiyadi ugu dambeeyey ee shahiidka iyo isagoo camliyadda fulinaya.
Halkan ka dhagayso Warbixin ku saabsan Filimka Baladxaawo